ဘယ်လိုအပြည့်အဝ-ခန္ဓာကိုယ် detox သင့်အရေပြားပေါ်မှာဂရိတ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလား - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ » ဘယ်လိုအပြည့်အဝ-ခန္ဓာကိုယ် detox သင့်အရေပြားပေါ်မှာဂရိတ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလား
Image ကိုရင်းမြစ်: Pexels.com
နေ့ရက်တိုင်း, လူတွေနေ့တိုင်းအရေပြားအပေါ်အသုံးပြုကြသည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးထုတ်ကုန်မေ့ဘဲ, အလေထုထဲတွင်အဆိပ်, အစားအစာ, သူတို့မှရေကိုသောက်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအဆိပ်ပိုးသတ်ဆေး, ပလပ်စတစ်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အရည်များပါဝင်သည်။ သင်တို့သည်ဤအမှုအရာတို့ကိုရှင်းလင်းစွာခုတ်မောင်းရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်, ကသူတို့အားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်မကြာခဏမဖြစ်နိုင်ဘူး။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထူးခြားဖန်ဆင်းတော်နှင့်အထဲတွင်ဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာအဆိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်နေ့ညဉ့်မပြတ်အလုပ်လုပ်သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားအထင်ရှားဆုံးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ် detoxifying များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမဆိုအန္တရာယ်ကနေခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်မစင်အဘို့အဆင်သင့်အတွက်တ္ထုများစောင့်ရှောက်။ အရေပြားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျှံအဆိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သတိပြုပါ။ ဤတွင်သင့်ရဲ့အသားအရေကိုသင့် Full-ခန္ဓာကိုယ် detox ပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုအကျိုးကျေးဇူးများတချို့ရှိနေပါတယ်။
သငျသညျချွေးအခါတိုင်း, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသမျှကိုအဆိပ်၏ 10% အထိသင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထုတ်။ ထို့ကြောင့်ပင်သင်၏အနေစဉ်အတွင်း ဘက်စုံ detox သန့်စင်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မြန်မြန်အဆိပ်ထုတ်လွှတ်နိုင်အောင်သင်ထွက်အလုပ်လုပ်သေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသားအရေထို့ကြောင့် detox ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်ကူညီပေးပါမည်။ အဆိုပါ Cayenne ငရုတ်ကောင်းသန့်စင်သင်သည်အခြား detox လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထက် ပို. ချွေးအောင်များအတွက်လူသိများသည်။
သင်တစ်ဦး detox အစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြသောအခါ, ဒါ့အပြင်အရေပြားအောက်တွင်ဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာအဆိပ်ကိုရှင်းလင်းစေရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဤရွေ့ကားအဆိပ်လည်း breakouts စေစုဆောင်းအလှအပထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်ကြောင့် detox ဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးအသားအရေရဲ, ချောမွေ့မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောအဆိပ်မရှိရင်, သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကလိုအပ်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားနေ့ကလှုပ်ရှားမှုများမှ နေ့မှစ. အရှိဆုံးအလွဲသုံးစားမှုရရှိသွားတဲ့။ ဥပမာ, ချက်ပြုတ်နေချိန်တွင်သင်သည်မတော်တဆစားပွဲတစ်ခုဆန့်ကျင်သင်၏ခြေကိုထိမှန်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်မည်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ရာမသက်ဆိုင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုနိမ့်သည်ဆိုပါကသူတို့က, ပုံပေါ်ဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့၏, အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒီအင်္ဂါထိတွေ့ကြောင့်အရေပြားဒဏ်ရာဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပင်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အကူအညီမပါဘဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလောက်အောင်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်ဒါကြောင့်တစ်ဦး detox အစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ detox အစီအစဉ်အပြင်, သငျသညျလုံးဝသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှရတဲ့အနေဖြင့်ရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအလယ်အလတ်လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရေပြားနေမကောင်းကျန်းမာရေး၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာပြသထားတယ်။ ဤသည်သင်တို့အပေါင်း၌ကုန်ကျစရိတ်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်မဆိုစိတျအပိုငျးသို့ရတဲ့အနေဖြင့်ရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးသင့်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဘီယွန်းစတဲ့အကြီးအဥပမာဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ် detox ၏အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးများ။
လူအများစုဟာအဝလွန်ဖြစ်ခြင်းသာသင့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသက်ရောက်သည်ယူဆ။ သို့သော်ဖြစ်လျက်ရှိအဝလွန်လည်းသင့်ရဲ့အသားအရေကိုထိခိုက်အတွက်မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်အကျွံအလေးချိန်စုဆောင်းတဲ့အခါမှာတဦးတည်းအဘို့, ကအင်ဆူလင်ကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်သည့်အခါ, သင့်အသားအရေ acanthosis nigricans အဖြစ်လူသိများကြသည်မှောင်မိုက် velvety ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအသားအရေခြံဒါမှမဟုတ်ထပ်နေသည်ဘယ်မှာထားရာဤအများသောအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အားလုံးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျော်ခြံအတွင်းတိုးကိုလည်းမြေပြင်မွေးမြူဘက်တီးရီးယားဖြစ်လာရသောထောင်ချောက်အစိုဓာတ်ကို, ရန်သင့်အသားအရေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဒေသများယားယံဖြစ်လာနှင့် ooze စတင်, တဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုရန်သင့်အားကျရောက်နေတဲ့အောင်နိုငျသညျ။
အလွန်အကျွံအလေးချိန်လည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲလမ်းပိုင်းအမှတ်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွါး, ရှိအောင်နှစ်သက်မဟုတ်သည့်။ သူတို့ကအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသို့တူးနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကျန်းမာအလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရန်လျှင်ဤအခြေအနေများတားဆီးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်သန့်စင်သင်အလေးချိန်အစာရှောင်ခြင်းတွေအများကြီးဆုံးရှုံးဖို့နိုင်ပါတယ်။ သင်ချောမွေ့နှင့်ရှင်းလင်းသောအသားအရေရှိစဉ်အမြဲရန်ပယ်အလေးချိန်စောင့်ရှောက်သောသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အိုမင်းတားဆီးမရနိုငျသောအရာတစ်ခုခုသည်။ သငျသညျဟောလိဝုဒ်မှတစုံတခုကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်သို့သော်လျောက်ပတ်အိုမင်းကဲ့သို့သောအရာလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်မတ်တပ်ရပ်သည့်အခါသင်တို့အရိုးကွဲအက်နားမထောင်ခြင်းမပြုမီ, သင်သည်သင်၏အရေပြားပေါ်မှာအိုမင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ elasticity ဆုံးရှုံးစတင် rougher ဖြစ်လာ, ပင် thinning စတင်ပါလိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်သွားရအဖြစ်သင့်အသားအရေကိုပိုထိခိုက်လွယ်ဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့အသားအရေကနေလေးလံတဲ့သတ္တုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အစွန်းရောက်ရှင်းလင်းရေးအချိန်မတိုင်မီအိုမင်းကနေစောင့်ရှောက်။ နောက်ဆုံးတွင်ကချောမွေ့နှင့်ပျော့ပြောင်းပြီးခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအစဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေအရေးအကြောင်းတွေစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသန့်စင်ပြီးအကြီးအ spa နှိပ်နယ်မှုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အရေပြားကိုဖြေလျော့ခြင်းနှင့်စောင်ရေတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ Ericka Baldwin ထိရောက်စွာရှိပါတယ် အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ် detox ကို အသုံးပြု. အိုမင်းနှောင့်နှေး။
သင်၏နှုတ်ကိုသင်စားအစားအစာကနေအနံ့ထုတ်လုပ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အသားအရေလည်းနီးပါးအတိအကျသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့သွင်းထားသောအရာကိုတူသောနံ့သာကြတယ်။ ဥပမာ, သငျသညျအရက်နှင့်ရေအနည်းငယ်အများကြီးကိုမသောက်သူတွေကိုရွံရှာဘွယ်သောအနံ့ချွေးရှိသည်ဖို့လေ့ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ နီးပါးအဖြစ်များစွာသောရေကိုချွေးတွေအများကြီးကိုမသောက်ပေမယ့်အနံ့နှိုင်းယှဉ်မရနိုငျတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ။ သငျသညျ unhealthily အစာစားရန်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, လူတွေကပဲသင့်ရဲ့အသားအရေအနံ့အားဖြင့်ပြောပြနိုင်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက detox သူတို့အားကြောက်မက်ဘွယ်သောရနံ့ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကူညီပေးသည်နှင့်သင့်အသားအရေကိုရှာဖွေနေခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောအနံ့အရွက်။
သငျသညျ detox ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်အဓိကအကြောင်းပြချက်သင်၏အသက်တာ၏အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးက detox ဖြစ်စဉ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးစွာခံစားရရန်ခွင့်ပြုလည်းသင်နှင့်အတူကြည့်ရှုသို့မဟုတ်မိတ်ကပ်မပါဘဲလမ်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးပိုပြီးသရုပ်ြပခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2018 admin သတင္းေၾကျငာခ်က္ မှတ်ချက်မရှိ